Fandriana hopitaly fanaovana asa elektrika dimy tsara indrindra miaraka amina mpamokatra sy lanjan'ny lanjany | Webian
A01-1e dimy fampiasa elektrika icu fandriana misy lanjany
Ny farafara fitsaboana elektrika misy multifunctional dia misy headboard ABS, fibatana fiandrasana ABS, lovia fandriana, farafara fandriana ambony, farafara fandriana ambany, actuator mandeha amin'ny herinaratra, mpanara-maso, kodia manerantany ary singa lehibe hafa. ny fitsaboana, famonjena ary famindrana ireo marary ao amin'ny tobim-pitsaboana (ICU) sy ny paroasy ankapobeny.
Ny haavon'ny fandriana dia vita amin'ny takelaka vy manaparitaka mangatsiaka avo lenta. Iray - tsindrio afovoany hidin-trano afovoany hidy efatra amin'ny fotoana iray. ABS anti-collision boribory fandriana lohan-doha feno koronosy, tsara tarehy sy malala-tanana. Ny takelaka fandriana dia miaraka amina tontonana mpitsabo mpanampy tsy miankina, izay afaka mahatsapa ny fandidiana rehetra sy ny fanidiana ny fandriana. Fandraisana an-damosina amin'ny ampahany sy lohalika, fiasan-tseza tokana ho an'ny paetaentsin'ny fo, fihenan'ny haingam-pandeha havia havia sy havanana, mety ho an'ny marary fo fitsaboana vonjy maika amin'ny toe-javatra vonjy maika. , bokotra fanaraha-maso napetraka, mora ampiasaina. Miaraka amin'ny fampisehoana Angle. Ny fahaizan'ny entana mavesatra indrindra dia 250Kgs. Fananganana moto fanaraha-maso 24V dc, mety sy haingana.
1) habe: halavany 2200mm x sakany 900 / 1040mm x hahavony 450-680mm
2) Fialana sasatra farany zoro max: 75 ° ± 5 ° Fialan-tsasatra zoro max: 45 ° ± 5 °
3) Mandrosoa sy miverina mihodina zoro max: 15 ° ± 2 °
4) Famatsiana herinaratra: AC220V ± 22V 50HZ ± 1HZ
5) Fandraisana herinaratra: 230VA ± 15%
Ny torolàlana momba ny tontolon'ny tontolon'ny mpitsabo mpanampy
Ity bokotra 1 ity dia ny famonoana na famonoana ny asan'ny fibaikoana ao aoriana. Rehefa tsindriana ity bokotra ity dia hampiseho ny efijery raha mandeha na tsia ny fiakarana miverina. Rehefa tapaka io fiasa io dia hiala amin'ny hetsika ny bokotra 4 sy 7 amin'ny tontonana, ary ny bokotra fiasa mifandraika amin'izany amin'ny mpiambina dia tsy hihetsika intsony. Rehefa tsindrio ny 4 na 7 dia hampahatsiahy anao ny rafitra fa novonoina ilay fiasa.
Rehefa velomina ny bokotra 1, kitiho ny bokotra 4 hampiakarana ny vodi-farafara,
tsindrio ny bokotra 7 hampidina ny ambadiky ny fandriana.
Ity bokotra 2 ity dia ny famonoana na famonoana ny fiasan'ny tongotra. Rehefa ity tsindriana ny bokotra, hasehon'ny efijery raha mandeha ny fiasan-tongotra na tsia eny.
Ity bokotra 2 ity dia ny famonoana na famonoana ny fiasan'ny tongotra. Rehefa ity tsindriana ny bokotra, hasehon'ny efijery raha mandeha ny fiasan-tongotra na tsia eny. Rehefa tapaka io fiasa io dia ny bokotra 5 sy 8 eo amin'ny tontonana dia tsy hisy hetsika intsony, ary ny bokotra fiasa mifandraika amin'izany eo amin'ny fàfana dia tsy misy fihetsika koa. Rehefa tsindrio ny 5 na 8 dia hampahatsiahy anao ny rafitra fa novonoina ilay fiasa.
Rehefa velomina ny bokotra 2, kitiho ny bokotra 5 hampiakarana ny vodi-farafara,
tsindrio ny bokotra 8 hampidina ny ambadiky ny fandriana.
Ity bokotra 3 ity dia ny famonoana na famonoana ny fihenan-tsofina. Rehefa tsindriana ity bokotra ity dia hampiseho ny efijery raha mandeha na maty ny fihenan-tsofina.
Rehefa tapaka io fiasa io dia hiala amin'ny hetsika ny bokotra 6 sy 9 amin'ny tontonana, ary ny bokotra fiasa mifandraika amin'izany amin'ny mpiambina dia tsy hihetsika intsony. Rehefa tsindrio ny 6 na 9 dia hampahatsiahy anao ny rafitra fa novonoina ilay fiasa.
Rehefa velomina ny bokotra 3, kitiho ny bokotra 6 handroso amin'ny ankapobeny,
kitiho ny bokotra 9 mankany aoriana kely
Rehefa tapaka io fiasa io dia ny bokotra 0 sy ENT eo amin'ny tontonana dia tsy hisy hetsika intsony, ary ny bokotra fiasa mifandraika amin'izany eo amin'ny fàfana dia tsy misy fihetsika koa. Rehefa manindry 0 na ENT ianao dia hampahatsiahy anao ny rafitrafa novonoina ilay fiasa.
Rehefa velomina ny bokotra ESC, kitiho ny bokotra 0 raha hanainga amin'ny ankapobeny,
bokotra bokotra ENT hatrany ambany.
Jiro herinaratra: Ho foana ity jiro ity rehefa mandeha ny herinaratra
Avelao ny torolàlana am-pandriana: ny Shift tsindry + 2 dia mampirehitra / miala ny fanairana amin'ny fandriana. Rehefa mandeha ny asany, raha miala eo am-pandriana ilay marary, dia hirehitra ity hazavana ity ary haneno ny fanairana fanairana.
Torolàlana momba ny fikojakojana lanja: rehefa mila manampy entana ao amin'ny fandriana hopitaly ianao na manala zavatra vitsivitsy avy ao amin'ny fandriana hopitaly dia tokony tsindrio aloha ny bokotra Keep. Rehefa mirehitra ny jiro famantarana, mampitombo na mampihena ireo entana. Aorian'ny fandidiana, tsindrio indray ny bokotra Keep mba hamono ny jiro famantarana, hamerina ny fanjakana mavesatra ny rafitra.
Ny bokotra Function, raha ampiarahina amin'ny bokotra hafa dia hanana fiasa hafa.
Ampiasaina amin'ny fikajiana lanja
Bokotra mandeha amin'ny herinaratra, hikatona ho azy ny rafitra aorian'ny 5 minitra.
Raha hampiasa azy io indray dia tsindrio ny bokotra herinaratra eo amin'ny bokotra.
Ny torolàlana momba ny fiasan'ny tontonana ao anaty vala
▲ manainga, ▼ midina;
Bokotra fitsaharana ampahany
Bokotra fitsaharana ampahany amin'ny tongotra
Fandraisana an-damosina ampahany sy tongotra
Ny bokotra ankavanan'ny bokotra ankavanan'ny bokotra havia dia miamboho ny bokotra ankavanana
Fehezo ny fiakarana ankapobeny
Ny torolàlana momba ny fiasan'ny kalibration
1. Vonoy ny herinaratra, kitiho ny Shift + ENT (tsindrio fotsiny indray mandeha, aza tsindrio lava), ary avy eo tsindrio SPAN.
2. Ahodina ny bokotra herinaratra, henoy ny feon'ny "tsindrio" na jereo ny jiro famantarana, manondro fa efa natomboka ny rafitra. Avy eo aseho ny efijery (aseho amin'ny sary etsy ambany). Ny dingana fahatelo dia tokony harahina ao anatin'ny 10 segondra. Aorian'ny 10 segondra dia manomboka indray ny fandidiana hatramin'ny dingana voalohany.
3. Alohan'ny hahavitan'ny bara fanombohana dia tsindrio ny Shift + ESC hitazona mandra-pahatongan'ny rafitra mampiseho ilay interface manaraka.
4. Tsindrio ny 8 mba hidirana amin'ny toetoetran'ny fikajiana, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany. 400 ny sanda default (400kg ny entana mavesatra indrindra).
5. Tsindrio ny 9 mba hanamafisana, ary ny rafitra dia miditra amin'ny interface tsy misy fanamafisana, toy ny aseho eo amin'ny sary etsy ambany.
6. Tsindrio indray ny 9 hanamafisana ny aotra, ary avy eo miditra ao amin'ny sehatr'asa fametrahana lanjany ny rafitra, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany
7. Press 8, ny rafitra dia niditra tamin'ny toeran'ny calibration araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany. (Ny lanjan'ny fikajiana, toy ny ambaratonga elektronika alohan'ny fanamafisana ny orinasa), ampidiro ny lanjan'ny lanja (singa Kgs, ny lanjany dia mety ho olona na zavatra , fa tsy maintsy fantatrao ny tena lanjan'ilay olona na zavatra. Ny fomba tsara indrindra dia ny fandanjana azy aloha, ary ny lanjany aorian'ny fandanjana azy dia ny lanjan'ny voarindra., avy eo ampidiro ny lanjany). Amin'ny fitsipika, ny lanjany dia tokony ho mihoatra ny 100 kg, latsaky ny 200 kg.
Fomba fampidirana lanja: fanindriana ny bokotra 8, mijanona an-jatony maro ny bokotra, tsindrio ny 8 ka hatramin'ny folo, avy eo tsindrio ny 8 amin'ireo, tsindrio ny 7 mba hampiakarana ny isa, tsindrio indray mandeha hanampiana iray, mandra-panovinay ny lanjany ilaintsika.
8. Aorian'ny fampidirana ny lanjan'ny kalibration dia apetraho eo afovoan'ny fandriana ny lanjany (olona na zavatra).
9. Rehefa miorina ny fandriana ary tsy mihetsika ny "stable" dia tsindrio ny 9, araka ny aseho eo amin'ny sary etsy ambany, izay manondro ny fahavitan'ny fikajiana.
10. Avy eo, tsindrio ny Shift + SPAN hamonjy ireo masontsivana fanamafisana, araka ny aseho eo amin'ny sary etsy ambany, ary azo apetraka ny lanjany (olona na zavatra).
11. Farany, ny Shift + 7 dia napetraka ho aotra, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Mba hitsapana raha marina ny toerana napetrakao dia apetraho eo amin'ny fandriana aloha ny lanjan'ny kalibration (olona na zavatra) mba hitiliana raha mitovy amin'ny lanja napetraka. Avy eo apetraho eo ambony fandriana ilay olona na zavatra fantatra fa tena lanjany, raha toa ka mitovy amin'ilay lanja tena fantatra ny lanja naseho dia marina ny fananganana (tsara kokoa ny mitsapa imbetsaka amin'ny lanjany samihafa).
12. Fanamarihana: tsy misy marary mandry eo am-pandriana, raha ny lanjany aseho mihoatra ny 1Kg, na latsaky ny 1kg, tsindrio ny Shift + 7 hamerenana. Matetika ny fanoloana ny entana raikitra (toy ny kidoro, ny lambam-pandriana, ny ondana ary zavatra hafa) eo am-pandriana dia hisy vokany amin'ny lanjan'ny fandriana. Ny lanjan'ny niova dia hisy fiantraikany amin'ny vokatra mavesatra. Ny fandeferana milanja dia +/- 1 kg. Ohatra: rehefa tsy nitombo na nihena ny entana teo am-pandriana dia asehoy ny -0.5kg na 0,5 kg, araho maso izany dia voafetra ara-dalàna ny fandeferana.
13. Tsindrio ny Shift + 1 raha tehirizina ny lanjan'ny fandriana ankehitriny.
14. Tsindrio ny Shift + 2 hampandeha / hamonoana ny fanairana ao am-pandriana.
15. Tsindrio TANDREMO mba hitsimbinana lanja. Rehefa manampy na mampihena ny entana ao am-pandriana, voalohany, tsindrio ny KEEP, avy eo ampio na ahena ny entana, ary avy eo tsindrio ny KEEP mba hivoahana, toy izany, tsy misy fiantraikany amin'ny tena lanjany.
16. Tsindrio ny Shift + 6 hiresahana ireo singa kilao sy ireo kilao.
Fanamarihana: ny fiasan'ny bokotra mitambatra rehetra dia tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny Shift aloha ary avy eo dia tsindrio ny bokotra hafa.
1. Tokony hidina tsara ny casters.
2. Hamarino tsara fa mifamatotra mafy ny tadin'ny herinaratra. Hamarino tsara ny fifandraisana azo antoka an'ny mpanara-maso.
3. rehefa atsangana ny lamosin'ny marary dia aza afindra ny fandriana.
4. Tsy mahazaka mitsambikina eo am-pandriana ilay olona. Rehefa mipetraka eo amin'ny solaitrabe ny marary na mijoro eo am-pandriana dia aza afindra ny fandriana.
5. Rehefa mampiasa ny arofanina sy ny fantsona fampidirana dia hidio mafy.
6. Amin'ny toe-javatra tsy misy mpiambina dia tokony tazonina amin'ny haavo ambany ny fandriana hampihenana ny mety haratra raha mianjera avy eo am-pandriana ilay marary mandritra na ivelan'ny fandriana.
7. Aza atositosika na afindra ny fandriana rehefa vaky ny caster, ary alefa ny frein alohan'ny hihetsika.
8.Ny famindran-toerana tampoka dia tsy avela hisorohana ny fahasimban'ny fiarovana.
9. Aza afindra amin'ny alàlan'ny lalana tsy mitovy ny fandriana, raha misy simba ny caster.
10. Rehefa mampiasa ny maso, ny bokotra eo amin'ny tontonana fanaraha-maso dia azo tsindriana tsirairay fotsiny mba hamenoana ny hetsika. Aza manindry bokotra mihoatra ny roa mandritra ny fotoana iray hampiasana ny fandriana ara-pahasalamana elektronika marobe, mba tsy hampidi-doza ny fiarovana ny marary.
11. Raha ilaina ny mamindra ny farafara, voalohany, esory ny tsipika herinaratra, notapahina ny tariby mpanera herinaratra, ary nakarina ny arofanina mba hialana amin'ny marary amin'ny fizotran'ny fianjerana sy ratra. Mandritra izany fotoana izany, olona roa farafahakeliny miasa ny fivezivezena, mba tsy ho very fanaraha-maso ny lalana amin'ny fizotry ny fizotrany, ka miteraka fahasimbana amin'ny ampahany amin'ny rafitra, ary manimba ny fahasalaman'ny marary.
12. Ny motera an'ity vokatra ity dia fitaovana fampandehanana fotoana fohy ary ny fotoana maharitra dia tsy tokony hihoatra ny 10 minitra isan'ora aorian'ny famoahana tsirairay amin'ny toerana sahaza azy.
1. Ataovy izay hamonoana ny herinaratra mandritra ny fanadiovana, famonoana otrikaretina ary fikolokoloana.
2. Ny fifandraisana amin'ny rano dia hitarika amin'ny tsy fahombiazan'ny tsindry herinaratra, na koa ny fikororohana herinaratra, azafady mampiasa lamba maina sy malefaka hamafana.
3. Ny faritra vy miharihary dia harafesina rehefa tratry ny rano. Hamafa amin'ny lamba maina sy malefaka.
4. Azafady mba esory amin'ny lamba maina sy malefaka ilay plastika, kidoro ary tapany hafa.
5. Miserana sy misosona menaka, ampiasao ilay lamba maina manosika izay milentika ao anaty detergent tsy miandany hamafana.
6. Aza mampiasa menaka akondro, lasantsy, solika ary solvents hafa miovaova ary savoka manakotsa, spaonjy, borosy sns.
1. Mba karakarao tsara ireo antontan-taratasy mifampitohy sy faktiora amin'ny fandriana, izay haseho rehefa manome antoka sy mitazona ny fitaovana ny orinasa.
2. Hatramin'ny datin'ny fivarotana ny vokatra, ny tsy fahombiazana na ny fahasimbana ateraky ny fametrahana marina sy ny fampiasana ny vokatra araky ny torolalana, ny karatra fiantohana ny vokatra sy ny faktiora dia afaka mankafy garantie maimaimpoana iray taona sy serivisy fikojakojana maharitra.
3. Raha misy tsy fahombiazan'ny masinina dia esory avy hatrany ny famatsian-jiro, ary mifandraisa amin'ny mpivarotra na mpanamboatra.
4. Ireo mpiasan'ny fikarakarana tsy matihanina dia tsy manamboatra, manova, mba hisorohana loza.
Teo aloha: Fandriana hopitaly miasa dimy
Manaraka: Fandriana mpitsabo mpanampy elektrika dimy